China excavator ndị na-emepụta ịwụ ala na ndị na-ebu ya | MINYAN
Maka igwu ala na mmetụta dị ala, ihe ndị dị ala dị ka unyi, loam, na ngwakọta agwakọta nke unyi na gravel gravel. Ihe Nlereanya: Igwu ala ọnọdụ nke General Duty tip ndụ karịa 800 awa. A na-ejikarị ibu ọrụ General Duty Buckets bụ ndị kachasị ewu ewu, ndị na-emepe emepe na-eji ha eme ihe iji gwupụta na obere abrasion ngwa. Mkpa ọkụ owuwu belata ibu oge na-amụba arọ nke nwere ike weliri. Standard size nkwụnye na Atụmatụ.
Standard ịwụ bụ ndị na-ewu ewu ụdị na etiti na Obere excavator, ọ adapts ọkọlọtọ efere ọkpụrụkpụ na ọ dịghị ihe ọ bụla doro anya nhazi usoro. Njirimara: ịwụ ike bụ nnukwu, ịwụ n'ọnụ ebe bụ nnukwu na nwere nnukwu stacking elu, n'ihi ya, ọ nwere nnukwu ndochi ọnụọgụ, na-azọpụta ọrụ oge na elu arụmọrụ. Wụ a dabara maka ọkụ na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi, dị ka igwupụta ụrọ na ibutu ájá, ala na gravel. Ihe ọghọm bụ ọkpụrụkpụ efere dị obere, enweghị efere na-eme ka ahụ sie ike, yabụ oge ọrụ dị mkpirikpi.
Anyị na-enye ọtụtụ bọket maka igwe site na 0.01cbm ruo 12cbm na ikike ịwụ maka nnukwu ngwa dị iche iche. Ngwa ndị a gụnyere ọkụ na izugbe, ụzọ na okporo ụzọ yana ịgbari okwute na ebe a na-egwupụta akụ.Anyị na-arụpụta bọket niile akara site na nchara dị elu. Anyị nwere ike ịnye Mgbakwụnye maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị excavator niile.
E wezụga bọket ọkọlọtọ, bọket Rocky na Nnukwu bọket, anyị na-enyekwa nzube pụrụ iche, dị ka bọket bọket, Hydraulic isi mkpị bọket, ọkpụkpụ bọket, Nhicha bọket, Grab na bọket, rake, shọvel bọket, ripper, ripper ịwụ, na-ebu bọket na ndị ọzọ Mgbakwụnye gị excavator.Nkwakọ ngwaahịa & nzipuNa-ere nkeji: Single iheSingle ngwugwu size: 20X20X20 cmSingle dị arọ: 60.000 n'arọ
Typedị ngwugwu:Pallet ọkọlọtọ mba ma ọ bụ nke osisi. 1. otu 20GP ike Ibu Ibu banyere 12-14 iberibe 1.0m3 ma ọ bụ 1.2m3 bọket maka 20ton excavator (Obosara erughị 42 sentimita asatọ) 2. otu 40HC nwere ike ibu ihe 26-28 iberibe 1.0m3 ma ọ bụ 1.2m3 bọket maka 20ton excavator; 3. otu 20GP nwere ike ibu ihe 8 iberibe 1.6m3 bọket maka 30ton excavator; 4. otu 40HC nwere ike ibu banyere 16 iberibe 1.6m3 bọket maka 30ton excavator.
Ibu (iberibe) 1 - 2 3 - 10 11 - 20 20
Est. Oge (ụbọchị) 15 35 49 Ndi kpakorita
N'ihi na nkịtị egwu ala na loading eme nke ụrọ, ájá ma ọ bụ ndị ọzọ rụrụ ihe onwunwe na obere ma ọ bụ enweghị irighiri ma ọ bụ nnukwu okwute, ezigbo udi emesi magburu onwe egwu ala Njirimara na nnukwu ikike.
Buwụ ihe maka saịtị
Nke gara aga: Mini ịwụ obere scoop 70 obosara
Osote: ịwụnye nkume ịwụ